Vidim –bary midangana : « Misy manafim-bary ny mpivarotra », hoy ny minisitera | NewsMada
Vidim –bary midangana : « Misy manafim-bary ny mpivarotra », hoy ny minisitera
Par Taratra sur 21/10/2017
Miaiky ny fitondrana fa misy tsy manara-dalàna tokoa ireo mpivaro-bary eto amintsika. Na ampy tsara aza ny tahirim-bary, misy ny manararaotra tsy manara-dalàna toy ny manafim-bary, ohatra, ka alaim-panahy mampidangana ny vidiny.
Nampahafantatra ny minisiteran’ny Varotra sy ny fanjifana, fa maro ny fidinana ifotony natao nanerana ny faritra, nanomboka ny fiandohan’ny septambra teo. Nisy ny fihaonana tamin’ireo mpisehatra samihafa amin’ny lafiny vary, toy ny mpanafatra avy any ivelany, ny mpamongady, ny mpaninjara, hisorohana ny olana amin’ny famatsiam-bary. Taorian’izay, narahi-maso ireo orinasa mpandraharaha amin’ny vary any Toamasina sy ny eto Antananarivo. Tsikaritry ny minisitera fa ampy tsara ny tahirim-bary ary tsy misy atahorana ny famatsiam-bary. Nahita koa ny minisiteran’ny Varotra fa nisy tsy nanara-dalàna ny mpandraharaha toy ny fanafenam-bary, tsy fanarahan-dalàna amin’ny fomba fivarotana ny vary.
Tsy mifanalavitra ny vidiny
Ao anatin’izany ny tsy maintsy hanaovana fanambarana ny tahirim- bary, ny fananana fanamarinana fahazoana mihinana ny sakafo (certificat de consommabilité), ny hametrahana ny vidim-bary. Nomarihin’ny minisitera manokana fa tsy tokony hofitahana ny mpanjifa amin’ny vidim-bary. Mifanalavitra ny vidin’ny vary hafarana avy any ivelany sy ny avy eto an-toerana. Raha ny hita anefa, tsy mifanalavitra velively fa saika mitovitovy avokoa ny vidin’ireo karazany roa ireo. Manodidina ny 1.800 Ar-2.100 Ar ny kilaon’ny vary avy any ivelany ary manomboka 2.000 Ar (dista), 2.200 Ar (vary gasy mena), 2.300 Ar (vary gasy mangamila, makalioka) ny vary eto an-toerana.
Midika ireo, fa tsy tena voafehy ny fitsinjovana ny mpanjifa ary maro ny andraikitra mila hamafisina.